एमसीसी सम्झौताबारे पठाइएको पत्र तुरून्त सार्वजनिक गरियोस् : भीम रावल
November 4, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी सम्झौताबारे पठाइएको पत्र तुरून्त सार्वजनिक गरियोस् : भीम रावल
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले एमीसी पारित गराउने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पठाइएको पत्र तुरून्त सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आज (बिहीबार) सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले यस्तो बताएका हुन् । रावलले राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौताबारे पठाईएको पत्र तुरुन्त सार्वजनिक गरिनुपर्ने […]
भाग्यलाई जितेरै छाड्छन् यी तीन राशी हुनेहरु ! जुनसुकै हद सम्म पनि मेहतन गर्न सक्छन् यिनीहरु…
November 4, 2021 N88LeaveaComment on भाग्यलाई जितेरै छाड्छन् यी तीन राशी हुनेहरु ! जुनसुकै हद सम्म पनि मेहतन गर्न सक्छन् यिनीहरु…
एजेन्सी । यदि तपाईं हिन्दु धर्म संस्कृतिमा बिश्वास राख्नु हुन्छ भने राशीले व्यक्तिको जीवनमा धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नरहला। हरेक व्यक्तिको भाग्य व्यवहार र आचरण, र भविष्य समेत राशीले नै बताउने गर्छ । जन्मकुण्डलीमा भरहेको विभिन्न ग्रहको प्रभाव अनुसार राशीको भविष्य निर्धारण हुने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ । सफल हुने […]
ओली, प्रचण्ड र नेपालले आज एकै नगरपालिकामा सम्बोधन गर्ने
November 4, 2021 N88LeaveaComment on ओली, प्रचण्ड र नेपालले आज एकै नगरपालिकामा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । कुनै समय एकै पार्टीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता रहेका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपालले आज एकै नगरपालिकामा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनीहरु एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा एकै पार्टीका नेताहरु थिए । तर आज परिस्थिती फरक रुपमा बदलिएको छ । नेकपा (एमाले) अध्यक्षको रुपमा ओली, माओवादी केन्द्रको […]
यी अंग छोएपछि महिलाहरु यौन सम्पर्कका लागि तयार हुन्छन्
November 4, 2021 N88LeaveaComment on यी अंग छोएपछि महिलाहरु यौन सम्पर्कका लागि तयार हुन्छन्
एजेन्सी : शारीरिक सम्बन्ध अनिवार्य र एउटा जैविक आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या हुने गरेको छ ।आफ्नो जोडीमा शारीरिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि एकअर्काको रुची बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले के गर्दा आफ्नो पार्टनर शारीरिक सम्बन्धका लागि तयार रहेको हो भन्ने कुराको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । खासगरी केटाले केटीलाई कुन अंगका कारण आफू प्रति आकर्षित हुन्छन् […]
एमसीसी पास हुन्छ, गठबन्धन चुनावसम्म – प्रधानमन्त्री देउवा
November 4, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी पास हुन्छ, गठबन्धन चुनावसम्म – प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन आगामी चुनावसम्म नै रहने बताएका छन् । बेलायतको ग्लास्गो नगरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलनमा भाग लिई बिहीबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको गठबन्धन आगामी चुनावसम्म नै रहने बताएका हुन् । उनले भने‚ ‘गठबन्धन सरकार पुरै समयसम्म रहन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा भने प्रधानमन्त्री […]
November 4, 2021 N88LeaveaComment on हराउँदै छ भैलीको मौलिकता, हिन्दी र अङ्ग्रेजी गीतमा नाचेर ‘भाँडभैलो’
काठमाडाैं । सोह्र वर्षको उमेरमा भैली खेल्दा जम्मा भएको चामल बोराभरि बोकेर सातगाउँ डुल्नुभएका बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ का भवदत्त न्यौपानेलाई अहिले पनि भैलेनीको खुब याद आउँछ सत्तरी वर्षीय न्यौपानेलाई उहिलेको भैलेनी सम्झिँदा अहिले पनि मारुनी बनेर नाचौँ नाचौँ लाग्छ । महिलाको वेशमा पुरुषले सोरठी गीतमा नाच्नुलाई मारुनी भनिन्छ । गाउँभरिका तन्नेरी जम्मा भएर भैली खेल्दा, […]
एमालेले कहाँबाट ल्याउँदैछ महाधिवेशनमा खर्च गर्न करोडौं पैसा ?
November 4, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले कहाँबाट ल्याउँदैछ महाधिवेशनमा खर्च गर्न करोडौं पैसा ?
काठमाडौ । एमालेले आगामी महाधिवेशनको खर्चको लागि चन्दा नउठाउने भएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको खर्चको लागि सार्वजनिक रुपमा चन्दा आह्वान नगरेको बताए । केन्द्रको अनुमति बेगर स्थानीय रुपमा पनि चन्दा संकलन गर्न नपाइने उनले बताए । उनले स्थानीय रुपमा महाधिवेशनमा आउने लाग्ने यातायात खर्च पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै उठाउन पाइने बताए । ‘स्वेच्छिकरुपमा […]